Ingabe ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla kuzokwenza ngempela ukuba umuntu angabhubhi futhi abe nokuphila okuphakade? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ingabe ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla kuzokwenza ngempela ukuba umuntu angabhubhi futhi abe nokuphila okuphakade?
“Futhi uNkulunkulu uzozesula zonke izinyembezi emehlweni abo; akusayikuba khona ukufa, nokudabuka, nokukhala, ngisho nobuhlungu abusayikuba khona: ngoba izinto zakuqala sezidlulile” (IsAmbulo 21:4).
Mhlawumbe, manje, ufisa ukuthola ukuphila, noma mhlawumbe ufisa ukuthola iqiniso. Noma ngabe yikuphi, ufisa ukuthola uNkulunkulu, ukuthola uNkulunkulu ongancika kuye, futhi ongakunika ukuphila okuyingunaphakade. Uma ufisa ukuthola ukuphila okungunaphakade, kumele uqale uqonde umthombo wokuphila ingunaphakade, futhi kumele uqale wazi ukuthi uNkulunkulu ukuphi. Bese ngishilo ukuthi uNkulunkulu kuphela ongukuphila okungashintshi, futhi uNkulunkulu kuphela onendlela yokuphila. Njengoba ukuphila Kwakhe kungashintshi, ngakho kungokwengunaphakade; njengoba kuwuNkulunkulu kuphela indlela yokuphila, ngakho uNkulunkulu Uqobo uyindlela yokuphila okuphakade.
UKristu wezinsuku zokugcina uletha ukuphila, futhi ukubekezela kanye nendlela yeqiniso engunaphakade. Leli qiniso liyindlela umuntu angathola ukuphila ngayo, futhi yiyo kuphela indlela umuntu ayokwazi uNkulunkulu ngayo futhi agunyazwe uNkulunkulu.
Ukuthi ukuphila uNkulunkulu akufake kubo akupheli futhi akuphazanyiswa inyama, isikhathi, noma umkhathi. Lena imfihlakalo yokuphila uNkulunkulu akufake kumuntu nobufakazi bokuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu. Nakuba abaningi bengase bengakholwa ukuthi ukuphila kwavela kuNkulunkulu, abantu nakanjani bakujabulela konke okuvela kuNkulunkulu, kungakhathaleki ukuthi bayakukholwa noma bayakuphika ukuba khona Kwakhe. Uma ngelinye ilanga uNkulunkulu engake aguqule inhliziyo yakhe noma abuyisele kuye zonke izinto ezisemhlabeni noma athathe ukuphila akunikezile, akekho umuntu oyophila. UNkulunkulu usebenzisa ukuphila Kwakhe ukuze anakekele zonke izinto, eziphilayo nezingaphili, enze konke kuhleleke esebenzisa amandla negunya Lakhe. Leli iqiniso okungekho muntu ongalisungula noma aliqonde kalula, futhi la maqiniso angaqondakali kalula abaluleke kakhulu futhi awubufakazi kanye bokubonakala kwamandla empilo kaNkulunkulu. Manje yithi nginitshele imfihlo: Ubukhulu namandla okuphila kukaNkulunkulu ngeke kuqondwe ngokujulile yinoma yisiphi isidalwa. Kunjena manje, njengoba kwakunjalo nasekuqaleni, kuyoba njalo esikhathini esizayo. Imfihlo yesibili engizoyikhipha yile: Umthombo wokuphila uvela kuNkulunkulu, kwayo yonke indalo, akunandaba ukuthi yakheke ngendlela ehlukile. Kungakhathaleki ukuthi uluhlobo olunjani lwesidalwa, awukwazi ukuhamba uphambane nomgudu uNkulunkulu awubekile. Kunoma ikuphi, engikufisayo ukuthi umuntu aqonde ukuthi ngaphandle kokunakekelwa, ukulondolozwa, kanye nokondliwa nguNkulunkulu, umuntu ngeke athole yonke into okwakufanele ayithole, akunandaba ukuthi uzama noma uzabalaza kangakanani. Ngaphandle kokuthola ukuphila kuNkulunkulu, umuntu ngeke azi ukuthi uphilelani, futhi uyolahlekelwa injongo yokuphila. UNkulunkulu angamvumela kanjani umuntu ochitha ukubaluleka kokuphila Kwakhe ukuba angabi nandaba kanje? Kodwa futhi, ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungumthombo wokuphila.
Lapho umsebenzi wokunqoba sewuqediwe, umuntu uzolethwa ezweni elihle. Le mpilo, phela, izobe isesekhona emhlabeni, kodwa izobe ingasafani nhlobo nempilo yomuntu yanamuhla. Yimpilo sonke isintu esizoba nayo lapho isintu sonkana sesinqotshiwe, kuzoba isiqalo esisha somuntu emhlabeni, futhi ukuba isintu sibe nempilo enhle kangako, kuyobe kuwubufakazi bokuthi isintu sesingene embusweni omusha futhi omuhle. Kuzoba wukuqala kwempilo yomuntu noNkulunkulu lapha emhlabeni. Isisekelo sempilo enhle kangaka kufanele kube wukuthi, emuva kokuthi umuntu esenziwe waba msulwa futhi wanqotshwa, uyazithoba phambi koMdali. Ngakho, umsebenzi wokunqoba, isigaba sokugcina somsebenzi kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi isintu singene esiphethweni esimangalisayo. Impilo enje impilo yesikhathi esizayo yomuntu emhlabeni, yimpilo enhle kunazo zonke emhlabeni, uhlobo lwempilo elangazelelwa ngumuntu, inhlobo umuntu angakaze ayithole emlandweni womhlaba, Ngumphumela wokugcina womsebenzi wokuphatha weminyaka eyizi-6,000, yilokho isintu esikulangazelelayo kunakho konke, futhi kuyisithembiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kepha isithembiso sakhe asikwazi ukufezeka masinyane: Umuntu uzongena ekupheleni kwesikhathi esizayo kuphela uma umsebenzi wezinsuku zokugcina sewuqediwe futhi esenqotshiwe ngokuphelele, okusho ukuthi lapho uSathane esehluliwe nya. Umuntu uzongabi nemvelo enesono uma esecwengiwe, ngoba uNkulunkulu uzobe esemnqobile uSathane, okusho ukuthi ngeke kube khona ukuphazamisa kwamandla anobutha, futhi azobe engekho amandla anobutha angahlasela inyama yomuntu. Ngakho umuntu uzobe ekhululekile futhi engcwele—uzobe esengene kwiphakade. … kahle ngoba [a] uSathane usavusa uthuthuva yonke indawo emhlabeni, futhi nangenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha wonke awukafiki ekugcineni kwawo. Uma uSathane esenqotshiwe, umuntu uzobe esekhululekile ngokuphelele; uma umuntu ezuza uNkulunkulu futhi ephuma ngaphansi kwamandla kaSathane, uyobona iLanga lokulunga. Impilo efanele umuntu ojwayelekile izobe seyizuzekile futhi; konke okufanele kube ngokomuntu ojwayelekile—njengekhono lokuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle, nokuqonda ukuthi kufanele sidle futhi sigqoke kanjani, nekhono lokuphila ngokujwayelekile—konke lokhu kuzobe sekutholakele futhi. Noma u-Eva wayengazange alingwe inyoka, umuntu bekufanele ngabe ubenale mpilo ejwayelekile emuva kokuba esedaliwe ekuqaleni. Bekufanele ngabe wadla, wagqoka, futhi waphila impilo yomuntu ejwayelekile emhlabeni. Kepha emuva kokuba umuntu esonakele, le mpilo yaphenduka iphupho elingenakufezeka, futhi kuze kube inamuhla umuntu akalokothi acabange ngamehlo engqondo izinto ezinjengalezi. Empeleni, le mpilo enhle umuntu ayilangazelelayo, iyisidingo: Ukube umuntu ubengenaso isiphetho esinje, impilo yakhe eyonakele emhlabeni beyingeke ikhawuke, futhi ukuba beyingekho impilo enhle kangaka, bekungeke kube khona isiphetho ngomphumela kaSathane noma isiphetho kule nkathi lapho uSathane ebusa khona emhlabeni. Umuntu kufanele afike embusweni lapho amandla obumnyama engenakufinyelela khona, futhi lapho efika khona, lokho kuyofakazela ukuthi uSathane usehluliwe. … Ngesikhathi umuntu engena esiphethweni saphakade, umuntu uzokhonza uMdali, futhi ngenxa yokuthi umuntu usezuze insindiso futhi wangena esikhathini saphakade, umuntu ngeke esashisekela ukuthola nanoma iziphi izinjongo, nangaphezu kwalokho, ngeke adinge ukukhathazeka ngokuthi uvinjezelwe impi kaSathane. Ngale sikhathi, umuntu uyoyazi indawo yakhe, futhi enze umsebenzi wakhe, kanti futhi noma angasolwa noma angahlulelwa, wonke umuntu uyokwenza umsebenzi wakhe. Ngaleso sikhathi, umuntu uyoba isidalwa ngokobunjalo nangokwesikhundla. Ngeke kusaba khona ukuhlukana phakathi kwabaphakeme nabaphansi; umuntu nomuntu uyobe emane enza umsebenzi ohlukile. Kepha umuntu uyobe esaphila endaweni eyisiphetho ehlelekile efanelekile yesintu, umuntu uyokwenza umsebenzi wakhe ukuze akhonze uMdali, futhi isintu esinjengalesi kuyoba isintu saphakade.
kwesithi “Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa ” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Ngisabalalisa umsebenzi Wami ezizweni. Inkazimulo Yami ikhazimula emhlabeni wonke; intando Yami ikubantu abayidlanzana, bonke beqondiswa yisandla Sami…